शिक्षिकाले आफैले पढाउने छा’त्रसंग गरेको अ’श्लील ह’र्कतको भिडियो बा’हिरियो ( भिडियो सहित ) – Life Nepali
शिक्षिकाले आफैले पढाउने छा’त्रसंग गरेको अ’श्लील ह’र्कतको भिडियो बा’हिरियो ( भिडियो सहित )
यतिबेला सामाजिक संजालमा एक भिडियो निकै भा’इरल भएको छ उक्त भाइरल भएको भिडियो भारतको रहेको छ । एउटै विद्यालयमा पढने छात्र र शिक्षका को अ’श्लील ह’र्कत गरेको भिडियो भा’इरल भएको हो । एक शिक्षका र सोहि विद्यालयमा पढने विद्यार्थिको एका एक शोसल मिडियामा भाइरल भएको हो । ति शिक्षिकालाई छात्रले भिडियो कल गरेर न’गन अ’वस्थामा आफु संग एक्ले भएको बेला बोलाउछन् ।
उक्त भिडियोमा महिला बा’थरुम भि’त्र दे’खा परेकी हुन्छिन् ।उनि युवकले ति महिलालाई बारम्म बार कल गरेर मोबाइल आफु तिर अगाडि बढाउन भन्छन् । तर साचो कुरा त उनिहरु एकै स्कुलका शिक्षिकार स्टुडेन्ट रहेका छन् ।यहि भिडियोले यतिबेला सामाजिक स.जाल तातेको छ । विभिन्न खालका वि’क्रतिलाई भित्राएको छ ।
‌तर घर मानै यो भि’डियो बनेकाले स्कुलको कुनै पनि भूमिका नरहेको उक्त स्कुलका प्रिन्सिपलले बताए प्रिन्सिपलका अनुसार ति शिक्षिका भनिने महिला अध्यापक स्कुलमा आएकी थिइन् तर केही समय पहिले उनलाई स्कुलबाट नि’कालिएको थियो ।तिनै अ’श्लिल भिडियो बनाउने स्टुडेन्टलाई पनि केही दिन पहिले स्कुलबाट निकालिएको बताइएको छ ।
***यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ￼***
Previous ‘प्रेम’लाई सफल बनाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यस्ता उपायहरु –
Next म उसैको खाजाघरमा पसे, लगभग १५ मिनेट लाग्यो ! पुरा पढ्नुहाेस…